याै; न ‘सम्पर्क’ पछि गर्नै नहुने – सात काम हेर्नुस् !
यौ; न मानव जीवनको अनिवार्य र प्राकृतिक कुरा हो। यसमा एकअर्काप्रति प्रेम, समर्पण र सन्तुष्टिको महत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ। यौ ”न स”म्पर्क गरिरहेका बेला एक अर्कालाई भरपूर सन्तु’ष्टि दिन महिला अथवा पुरुष दुवैले धेरै मेहनत गरि’रहेका हुन सक्छन्।
यौ” न सम्पर्कका दौरा’न अपनाइको तरीकाले सन्तुष्टि पनि देला। तर, यौ” न सम्पर्क गरेलगत्तै तपाईंको पार्टनर पढ्न बस्नुभयो भने तपाईंलाई कस्तो मह’सुस होला ?
सहवासपछि गरिने यस्तै ग’ ल्तीहरु, जुन तपाईंले ग’ल्ती गरेको महसुस नगरे पनि यसले तपाईंको पूरै यौन जीवनलाई नै न’कारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
सुति हाल्नु :– धेरैजसो जो’डीहरु यी समस्याहरुबाट ग्रसित छन्। से”क्सपछि धेरै जोडीहरुको पार्टनर निदाइहाल्ने बा’नी हुन्छ, जसले गर्दा यौ”न सम्बन्धको मुड नै ख’राब हुन्छ।
सुतिहाल्ने बानीले गर्दा यौ”नका क्रममा अपनाइएका तरीकालाई तपाईंले एक अर्कासँग साट्न पाउनु हुन्न। स’हवासपछिको मु’डलाई बुझ्न सक्नु हुनेछैन।
सरसफाइमा लाग्नु :– यौ” न सम्पर्क गनुपूर्व सँगै नुहाउनु निकै लाभदायक मानिन्छ। तर, सहवासपछि हतार गरेर वासरुमतिर लाग्नु गल’त हुन्छ। स”हवास गरिरहेका बेला जोडीहरु केही खराब भएको पनि मतलब गर्दैनन्। तर, सकिनेबित्तिकै त्यो सफा गर्नका लागि वासरुमतिर गइहाल्छन्,
यो एक तरिकाले ठिकै हो। तर, तपाईंको पार्टनर त्यसपछि पनि से” क्स मुडमा नै हुनसक्ने भएर त्यसलाई लम्ब्याउने चाहना हुनसक्छ। सफा गर्नका लागि हतार गर्दा तपाईंको पार्टनरमा यौ” न सम्पर्कका दौरान केही नराम्रो घ’टना भयो कि भन्ने सोच आउन सक्ने भएका कारण पार्टनरको यौ” न सम्बन्धको मुड खराब’ हुनसक्छ।
साथीलाई फोन गर्नु :– धेरैजसो जोडीहरुले गर्ने यो अर्को साधारण ग’ल्ती हो। यो साँचो हो कि स’हवासका बेला कोही पनि आफ्नो फोन उठाउन र कामको कुरा गर्न इच्छुक रहँदैनन्। त्यसकारण यस्तो गफका लागि किन बिहानसम्म नकुर्ने त ?
यौ” न सम्बन्धलाई अनुभव गर्ने बेलामा आफ्नो कान र आँखालाई मोबाइलमा केन्द्रित गर्ने हो भने तपाईंको पार्टनरले तपाईं यसमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने सोच्नुहुनेछ, जसले यौ” न सम्पर्कको मुड खरा’ब गर्नसक्छ।
काम वा पढाइमा लाग्नु :– यौ” न सम्बन्धका दौरानमा जोडीले के सोचिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि यकिन भन्न गा’ह्रो छ। यदि कसैले स’हवासपछि पढ्नका लागि तरखर गर्छ भने त्यो नै उत्तर हुनसक्छ।
आफ्नो पार्टनरलाई एक्लै छोडेर आफू पढ्न अथवा बाँकी भएको काम सिध्याउनतिर लाग्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको यौन जीवनमा न’कारात्मक असर पुर्याउँदछ।
छुट्टाछुट्टै सुत्नु :– तपाईंको एक्लै सुत्ने बानी हुनसक्छ। तर, स’हवास गरेको रातमा भने एक्लै नसुत्नुहोस्। यौ” न सम्बन्ध गरिसकेपछि तकिया र सिरक पोको पारेर मस्त निदाउनका लागि पार्टनरलाई एक्लै छोड्नु पक्कै पनि बुद्धिमानी होइन।
कामका बारेमा कुरा गर्नु :– कतिपय यौ”न जोडीहरु सहवासपछि घरायसी समस्याका बारेमा कुरा गर्ने र यो’जना बनाउने गर्दछन्। साथै कामको तनावका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छन्। यसले यौ” न साथीको मनोविज्ञानमा सकारात्मक अर्थ राख्दैन। त्यसैले तनावयुक्त कुराहरु यस्तो समयमा नगर्नु नै राम्रो हुन्
२०७८ भाद्र ६, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 728 Views